Nagu saabsan - Danyang Yixun Makiinado Co., Ltd.
DANYANG YIXUN MECHINERY CO., LTD－ Waa soosaaris xirfadle ah si loo soo saaro mashiinka tolida / dhoobada badan ee loo yaqaan 'biaxial warp toint dunmiika, tolida mashiinka tolida dunta lagu tolo iyo mashiinka tuwaalka lagu tolo ee loo yaqaan' fiber fiber ', derin isku dhafan, gogol jeex jeex jeex jeexan ah iyo wax soo saarka dharka sida shirkadaha waaweyn: KARL MAYER, KARL MAYER MALIMO, LIBA, RUNYUAN.
Dhammaan la-hawlgalayaasha shirkaddan oo leh in ka badan 15 sanowarshaddan, waxaan ka leenahay in ka badan toban shati abuuris.YIXUN waxay siisaa xalka farsamada iyo xalka ganacsiga ee dhammaan badeecadaha iyo adeegyada. Anaga oo hubinayna macaashka ugu badan ee macaamilka waxaan ku guuleysanay inaan noqono adeegaha suuqa adduunka ee xalka ugu fiican ee tolida dunta, u diyaargarowga weelka dharka iyo dharka farsamada.
Maadaama aanu nahay bahwadaag ganacsi oo la isku halleyn karo muddo dheer, waxaan nafteenna kula tartameynaa inaan mar walba gaarsiino alaab tayo sare leh dhammaan meelaha.
Maaddaama aan nahay shirkad qoys oo dhaqaale ahaan madax bannaan oo sannado badan khibrad u leh ganacsiga waxaan taageereynaa tartanka iyo guusha muddada fog ee macaamiisheenna. Maaddaama aan nahay bixiye xallineed oo cusub waxaan sidoo kale dammaanad ka qaadaynaa heer sare oo amniga maalgashiga ah.
Iyada oo ku saleysan ururkeena caalamiga ah iyo dalabkeena ku saabsan wax soo saarka suuqyadeena waaweyn, waxaan had iyo jeer ka shaqeynaa meel u dhow macaamiisheenna iyo baahiyahooda gaarka ah.